Ngazakhela Kanjani Isigidi Samadola Sebhizinisi le-B2B Ngevidiyo Ye-LinkedIn | Martech Zone
Ngangakhela Kanjani Isigidi Samadola Sebhizinisi le-B2B Ngevidiyo Ye-LinkedIn
Lwesine, Disemba 10, 2020 Lwesine, Disemba 10, 2020 UJackie Hermes
Ividiyo iyitholile ngokuqinile indawo yayo njengenye yamathuluzi wokuthengisa abaluleke kakhulu, ane Ama-85% amabhizinisi basebenzisa ividiyo ukufeza izinhloso zabo zokumaketha. Uma sibheka ukumaketha kwe-B2B, Ama-87% wabathengisi bamavidiyo bachaze i-LinkedIn njengesiteshi esisebenzayo sokwenza ngcono amazinga wokuguqulwa.
Uma osomabhizinisi be-B2B bengasebenzisi leli thuba, balahlekelwa kakhulu. Ngokwakha isu lokubeka uphawu lomuntu siqu eligxile kuvidiyo ye-LinkedIn, ngikwazile ukukhulisa ibhizinisi lami ngibe ngaphezu kwamarandi ayisigidi ngaphandle kwemali.
Ukwakha ividiyo esebenzayo ye-LinkedIn kudlulela ngaphezu kokujwayelekile ukumaketha izeluleko ngevidiyo. Amavidiyo e-LinkedIn adinga ukwenziwa futhi alungiselelwe ngqo ipulatifomu ukuze afinyelele izithameli ezifanele futhi enze umthelela wangempela.
Nakhu engikufundile (futhi engifisa ukuthi ngikwazi) ngokusebenzisa ividiyo ye-LinkedIn ukwakha inkampani ye-B2B.
Ngazibophezela ekukhuphukeni umdlalo wami wevidiyo we-LinkedIn cishe eminyakeni emibili edlule. Ngangikhathazekile ngokwakha amavidiyo wokuthunyelwe kwenkampani, kepha ukufaka uphawu kumuntu siqu kwakukusha ngokuphelele kimi. Bengihlala ngicabanga ukuthi ukudala amavidiyo we-LinkedIn adinga ukuma ngokuma okuhle phambi kwebhodi elimhlophe bese uphuma (kubhalwe ngokusobala) ulwazi lokuthengisa olungenayo. Ngishintshe iqhinga lami futhi ngaqala ukudala amavidiyo angasho lutho ngimane ngikhuluma ngezingxenye zomkhakha engizaziyo nengizithandayo.
Esikhundleni sokugxila ekuthengiseni ibhizinisi lami, ngigxile ekuletheni izinto ezibucayi value kuzithameli zami. Ngiqhubekile nokwakha amavidiyo amaningi, ngazakhela njengongoti wezihloko kwezokumaketha, ezamabhizinisi, ezokuphatha kanye nezamabhizinisi. Ngokuthumela okungaguquguquki nokuxhumana okuvamile, ngakhulisa izethameli zami kakhulu ezinyangeni ezimbalwa ezizayo: manje sekutholwe abalandeli be-70,000!
I-pivot yami yamasu wevidiyo (kanye nokuzimisela kwami ​​ukuzitholela okuncane) kukhokhelwe ngesimo samathani wemikhondo emisha. Ngokuzibeka lapho futhi ngikhulume ngempilo yami, abantu bayangazi, bafinyelele uma ngabe bacabanga ukuthi bakulungele ukusebenza nathi, futhi inqubo yokuthengisa ihambisa umbani ngokushesha. Ngesikhathi la mathemba e-LinkedIn eqala ukuvakashela iwebhusayithi yenkampani yami noma ukufinyelela kimi, base bevele bengabaholi abafudumele. Kuze kube manje, inkampani yami isayine ngaphezu kwezigidi zamaRandi ezinkontileka ezivela emikhakheni evela ku-LinkedIn.
Ngenkathi ngithola usizo oluvela eqenjini elihle elondla leyo mikhondo, ukukhiqizwa okuholayo kuyisinyathelo sokuqala esikhulu-futhi kudinga isu levidiyo eliqinile le-LinkedIn.
Ukutshela Indaba Ebukwayo
Amavidiyo e-LinkedIn ayindlela enhle yokutshela izindaba ezicindezelayo, ezibukwayo mayelana nomkhiqizo wakho siqu nebhizinisi lakho. Yize womabili amafomethi emuhle, uvame ukudlulisa okuningi kakhulu ngomkhiqizo wakho kuvidiyo kunalokho ongakwenza eposini le-blog.
Inani levidiyo lilele kulokho okwazi ukukudlulisa ngokubonakalayo / ngokuzwakalayo. Ividiyo ivumela abantu ukuthi baxhumane nawe futhi bakwazi ngisho nokukwazi ngoba bangakhothoza imininingwane kulimi lwakho lomzimba nangendlela okhuluma ngayo. Abantu abaningi bangitshele ukuthi bazizwa sengathi sebengazi vele ngokubuka amavidiyo engiwabelana ngawo ku-LinkedIn.
Umlayezo ofanayo ungatholwa ngokwehluke kakhulu uma uzwa ithoni nesipikha sesikhulumi. Imithombo yezokuxhumana iyisizinda semibhalo esheshayo, kepha ividiyo izwa iyiqiniso ngokwengeziwe. IVideo ibuye ibe ngeyabantu “isigqoko sokugqamisa” esibe yizinkundla zokuxhumana. Kufanele uthole okuluhlaza kancane, okungokoqobo ngokwengeziwe ukuze wabelane ngevidiyo — isifundo engisifunde ngokuqhubekayo kulo nyaka odlule ngenkathi ngiqopha amavidiyo nezingane ezintathu ezifunda ekhaya ngemuva.
Ukuhlakulela Izilaleli Zakho Ezifanele
Imikhuba emihle efanayo esiyisebenzisa kwezinye iziteshi zokumaketha iyasebenza nalapha; okungukuthi, ukuthi kufanele ube namasu ngezethameli zakho, futhi kufanele unikeze abantu isizathu sokukhathalela.
Njengoba sithanda ukucabanga ukuthi ukuphonsa inetha elibanzi kuzokhiqiza ukuhola okuningi, siyazi ukuthi lokho akulona iqiniso. Udinga ukuba nenhloso ngezithameli zakho lapho udala ividiyo ye-LinkedIn. Ukhuluma nobani? Ngenkathi kufanele uqondise njalo okuqukethwe okubhaliwe kumuntu othile, ukuba nezithameli ezithile engqondweni ukuthi ukhuluma nobani ngokoqobo ngenkathi uqopha kuzokusiza ukwenza okuqukethwe okuphoqelela kakhulu.
Lapho usuthole ukuthi ukhuluma nobani, udinga umyalezo ozozwakala kabusha. Uyazi ukuthi yini engeke ivele kahle? Incazelo yomkhiqizo noma isevisi yakho. Udinga ukunikeza abantu a isizathu sokukhathalela ngenkampani yakho ngaphambi kokuthi ukhulume ngayo. Gxila ekwakheni okuqukethwe okufundisayo kungakhulunywa kakhulu ngenkampani yakho.
Ngaphambi kokuba uqale ukuqopha ifilimu, zibuze:
Yini izilaleli zami ezikhathalelayo?
Yini izilaleli zami ezikhathazekile ngayo?
Yini izilaleli zami ezifuna ukufunda ngayo ku-LinkedIn?
Khumbula: ukuhlakulela izithameli akuyeki lapho ushaya u-'Post. ' Udinga futhi ukwakha izithameli zakho ekugcineni ngokuxhumana (futhi ube nentshisekelo yangempela) emakethe yakho oqonde kuyo.
Ukuze uqiniseke ukuthi izethameli eziqondisiwe ozivezile ziyayibona ividiyo yakho, kuyasiza ukuxhumana kuqala. Mina nethimba lami senza lokhu ngokwakha uhlu lwamathuba embonini ngayinye futhi sibamema ukuthi bajoyine amanethiwekhi ethu ukuze babone okuqukethwe kwethu kokuphakelayo kwabo. Bahlale bekhunjuzwa ngomkhiqizo wethu nenani lethu ngaphandle kokuthi sithengise ngokweqile.
Ukudala Isu Lakho Levidiyo Ye-LinkedIn
Usukulungele ukuqala ukudala ividiyo yakho ye-LinkedIn ukwakha umkhondo wakho nowenkampani? Musa ukujuluka — kulula ukukwenza Qalisa kunokuba ucabanga.
Nawa amanye amathiphu engiwafundile mayelana nokwenza ividiyo esebenzayo ye-LinkedIn kule minyaka engu-2 edlule — kufaka phakathi izinyanga eziyi-10 zokuthuthukisa ividiyo ngesikhathi ubhadane:
Ungayicabangi ngokweqile. Vele uvule ikhamera bese udubula. Angizibukeli ngisho namavidiyo ami ngoba ngizozihlukanisa.
Yabelana ngokuthunyelwe ekuseni. Uzobona ukuzibandakanya okuningi ekuseni kunasebusuku.
Faka imibhalo engezansi. Abantu kungenzeka babheke ocingweni lwabo noma eduze kwabanye, futhi bangathanda ukufunda kunokulalela. Futhi umkhuba omuhle wokungeneka.
Faka isihloko. Ngenkathi ungeza imibhalo engezansi, engeza isihloko esidonsa ukunakekela kuvidiyo yakho
Thola okwakho. Okuthunyelwe kwami ​​okwenze kahle impela bekumayelana nokwehluleka, kukhombisa inqubekela phambili nokusingatha izimo ezinzima.
Yiba ngowangempela. Ngizamile ukuthumela uchungechunge lwamavidiyo kepha ukuba nokuthile okusha engingakusho (ngezihloko ezahlukahlukene nezithonjana) kuheha kakhulu.
Ukwengeza ngekhophi. Abantu kungenzeka bangayibukeli ividiyo yakho ephelele, futhi kulungile! Banikeze isizathu sokuhlala kokuthunyelwe kwakho futhi bazibandakanye ngokungeza ikhophi eliphoqayo.
Ukukhulisa umkhiqizo wakho we-B2B futhi uhlale uncintisana, udinga ukuthi usebenzise ividiyo ye-LinkedIn. Ngakho vala amehlo akho bese ugxumela phakathi! Uma usuqale ukuthumela, ngeke ukholwe ukuthi awuzange ulayishe ngokushesha.
Landela uJackie Hermes ku-LinkedIn
Tags: b2bb2b ividiyoIsu levidiyo le-b2bujackie hermesLinkedInabalandeli be-linkinukuxhumana kwe-linkedinividiyo exhunyanisiweInaniukukhangisa kwevidiyoukuxoxa izindaba
UJackie Hermes uyi-CEO ye Ukwenzelela, i-ejensi esekwe eMilwaukee esiza ama-software-as-a-service (SaaS) ukuqala ukuthola imali futhi ikhule ngokushesha, kanye nomsunguli Iviki Lezamabhizinisi Labesifazane. Kusebenza kakhulu ku- LinkedIn, UJackie uvusa izingxoxo ngempilo yansuku zonke nezinselelo zokukhulisa inkampani eboshiwe. UJackie weluleka iziqalo zabafundi nge AmaCommons, ungomunye wabahleli be- Ukuqalisa iMilwaukee EMERGE, kanye nomeluleki nge Abatshalizimali beGolden Angels. Ngaphezu kokubandakanyeka kwakhe emsebenzini, uJackie ungumama wokutholwa kanye nomshayeli wesikhathi esizayo.
Abashicileli Bangasilungisa Kanjani Isitaki Sezobuchwepheshe Ukufinyelela Izithameli Eziya Ziqhekeka
Ithiphu: Ungazithola Kanjani Izithombe Ezifana Ne-Vector Esitokisini Sakho Sesithombe Sokuthengwa Ne-Google Image Search